रगतमा कसरी बढ्छ कोलेस्ट्रोल, के गर्ने ? के नगर्ने ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
चुरोटको सेवनले शरीरमा गुड कोलेस्ट्रोलको मात्रा घट्न थाल्छ। यसमा भएका निकोटिन र अन्य हानिकारक पदार्थले शरीरमा भएको गुड कोलेस्ट्रोललाई पनि ब्याडमा परिवर्तन गर्छ। कोलेस्ट्रोल ब्लकेज गर्ने गरी विकास हुन्छ।
चिकेनले पनि कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ। जसका कारण हप्तामा तीन–चार पिसभन्दा बढी नखाँदा राम्रो हुन्छ। रेड मिट त झन् खानै हुँदैन । खाए पनि महिनामा एक पटक मात्रै खादा राम्रो । महिलाले कोलेस्ट्रोल बढाउने प्रडक्ट बढी प्रयोग गर्दा पनि सन्तुलन नै हुन सक्छ। महिलामा फ्याट पचाउने क्षमता बढी हुन्छ।
फाइबरयुक्त खानाले कोलेस्ट्रोल घट्न सघाउँछ। प्लान्ट बेस खानेतेलको भने बढी प्रयोग गर्नुहुँदैन। काजुलगायतका ड्राइफुड दिनमा एक मुठीसम्म खाँदा त्यति धेरै फरक पर्दैन। कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नुमा सबैभन्दा बढी भूमिका जेनेटिक कारणको हुन्छ ।
कोलेस्ट्रोल, यसका लक्षण र कम गर्ने बिधि
कोलेस्ट्रोल भन्नासाथ धेरैको मुटु काम्न थाल्छ । मुटु काम्नु भनेकै मुटु सम्बन्धी समस्या हुनु हो । शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा धेरै भएमा मुटु सम्बन्धी समस्या हुने गर्छ । कोलेस्ट्रोल एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ हो जुन रगतमा पाइन्छ । यो शरीरका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यसैले रगतमा कोलेस्ट्रोल हुनु सामान्य कुरा हो ।
तर यसको अप्राकृतिक मात्रा हुनु भने समस्या हुनसक्छ । यो वंशाणुगत कारणले हुने एक सामान्य समस्या हो । शरीरमा ८० प्रतिशत कोलेस्ट्रोलको निर्माण कलेजोले गर्छ भने २० प्रतिशत कोलेस्ट्रोल भोजनबाट प्राप्त हुन्छ ।
कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नका लागि दैनिक ४० देखि ६० मिनेटसम्म व्यायाम गर्ने । धूमपान तथा मद्यपान त्याग्नुका साथै बोसोरहित खानेकुराको सेवन गर्ने ।
रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्न ओमेगा-३ फ्याटी एसिडको सेवन गर्ने जुन माछाबाट पाउन सकिन्छ । यसले खराब कोलेस्ट्रोल कम गर्नुका साथै राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउने गर्छ । माछा सेवन नगर्नेको हकमा कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण राख्न पालुङ्गो राम्रो विकल्प हुनसक्छ ।
शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई नियन्त्रित राख्न बोसोरहति तथा तारेको, भुटेको तथा चिल्लो खानेकुरालाई सकेसम्म कम गर्नुपर्छ ।
फाइबरयुक्त खानेकुराका साथमा हरिया सागसब्जी, फलफुल तथा तरकारीको सेवन अधिक मात्रामा गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक, भिटामिन सी, जिंक, सेलेनियमलगायतका एन्टीअक्सिडेन्टयुक्त पदार्थको सेवन गर्नुपर्छ ।
यसलाई कम गर्नका लागि प्राणायाम, व्यायाम तथा शारीरिक श्रम जरुरी पर्छ ।
कालो चियाले पनि कोलेस्ट्रोल घटाउन मद्दत गर्ने हुँदा यसले नियमित सेवन शरीरका लागि लाभदायक मानिन्छ ।
नियमित एक गिलास रेड वाइनको सेवनले पनि कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्न सकिन्छ ।
डार्क चकलेट, स्ट्रबेरी, कालो अंगुर, कागती, सुन्तला, व्लुबेरिज, एभोकाडो, स्याउ, किवी, अनार जस्ता फलफूलको सेवनले शरीरको वोसो नियन्त्रणमा राख्छ । यसको सेवनले कोलेस्ट्रोलको मात्रा समेत कम हुने गर्छ ।
रेशेदार खानेकुराका साथमा भिटामिन तथा मिनरलयुक्त खानेकुराको सेवनले पनि उच्च कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।
मोटोपनालाई नियन्त्रण गरेर तथा शरीरको अतिरिक्त तौल कम गरेर पनि कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
तनावले पनि मुटु सम्बन्धि समस्या बढाउने गर्छ । तनाव कम गरेर पनि मुटु सम्बन्धी समस्याबाट बचाउन सकिन्छ ।
खाना खाएको करिब एक घण्टा पश्चात् मनतातो सादा पानी पिउने । खाना खाएपछि करिब पाँच मिनेटसम्म आरामले बस्ने । त्यसपछि केही समय
कोलेस्ट्रोल खानाबाटै नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि पढ्नुहाेस्
दुधको प्रयोगले ट्राइग्लीसेराइड सँगसँगै कोलेस्ट्रोल पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । दुधबाट बन्ने अन्य परिकारको प्रयोगले पनि कोलेस्ट्रोल/ट्राइग्लीसेराइड बढ्न सक्छ । त्यसैले उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइडको नियन्त्रणको लागि खानामा दुध र दुधजन्य खानाको प्रयोगलाई न्यून गर्न जरुरी हुन्छ । कम चिल्लो दुध थोरै मात्रामा खान सकिन्छ ।
दुधभन्दा दही र महिमा फ्याट कम हुने भएकोले, चिल्लो कम दही र महिको प्रयोग गर्न मिल्छ । तर कोलेस्ट्रोलको औषधि सेवन गर्नु भन्दा दुध नखानु नै राम्रो उपाय हो । राती सुत्ने बेलामा दुध खाने बानी हटाउँन जरुरी हुन्छ । घ्युमा सैचुरेटेड फ्याट बढी भएकाले खानु नै हुँदैन । बनस्पती घ्युमा टान्स फ्याट बढी भएकोले खाने सोच्नु पनि हुदैन ।
हल्का टहलिने ।
खानाको बीचमा पानी नपिउने । खाना खाँदा आरामले बस्ने ।
टुसा उम्रेका खानेकुरा खाने ।
लसुन, प्याज, सोयाबीन आदि खानेकुरा पर्याप्त मात्रामा खाने ।
Don't Miss it माछामासु छाड्दै हुनुहुन्छ ? पूर्ण शाकाहारी हुनु पनि हुनसक्छ घातक !
Up Next तामाको भाडामा भुलेर पनि नराख्नुस् यी चिज, विष लागेर मृत्यु पनि हुन सक्छ !
के हो पुदिना ? बढ्दो गर्मीमा यस्ता छन यसका फाइदा
गर्मी सौसममा हामीले जे–जति खाने कुरा खान्छौं, त्यहाँ केही चटपटे चटनी बिना केही नपुगे जस्तो सबैलाई लाग्छनै । दिउँसोको खाना…
जाडोमा फुटेको हातलाई चाँडै सुन्दर बनाउँने केहि टिप्स
फुटेको हातलाई चाँडै सुन्दर बनाउँन नियमित मोश्चराइजर लगाउँनुपर्छ। यसबाट हातको सुख्खापन या फुटेको छाला चाँडै ठिक हुन्छ । केहि जानकारीहरु…